Fa maninona no manan-danja ho an'ny zanatsika ny dia? | Vaovao momba ny dia
Fa maninona no manan-danja ho an'ny zanatsika ny dia?
Vaovao momba ny dia | | soso-kevitra
Iza no tsy maniry dia lavitra? Voaporofo fa ny dia dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra amin'ny ady amin'ny adin-tsaina sy ny fanahiana. Miaina ao anatin'ny tontolo iray voamariky ny haingam-pandeha tanteraka isika, noho izany dia tsy maintsy mandray andraikitra mamela antsika hampiato ny gadona isika. Noho izany rehetra izany dia mivezivezy io dia fomba tsara indrindra ahazoana tombony tsy amin'ity lafiny ity ihany fa hanamafisana ny fifandraisana amin'ny fianakaviantsika koa. Tsy isalasalana fa ny dia iray miaraka amin'ny orinasa dia ankafizin'ny avo roa heny, fa raha mandeha miaraka amin'ny zanatsika isika dia hanao in-telo avo heny. Azontsika atao ny mankafy Hotely "All Inclusive" misy zaza maimaim-poana so it ANKAFIZO ary hadino ihany koa ny fanazaran-tena tafiditra ao an-tsekoly. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasongadintsika ny antony mahasoa ny zanatsika ny manao ireo dia ireo.
1 Ilaina ny fiankinan-doha amin'ny zanatsika
2 Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny zanatsika dia manana tombony ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Ilaina ny fiankinan-doha amin'ny zanatsika
Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hankafizana ny fiainana. Noho izany dia afaka mahazo tombony ho an'ny zanatsika isika, satria mivoatra ara-piaraha-monina sy ara-pihetseham-po, ankoatry ny fiterahana a toe-tsaina tantara alohan'ny fiainana sy ny sisa amin'ny olona manodidina azy.
Miditra amin'ny Iberostar Alcudia ParkAzon'izy ireo atao ny mifaly miaraka amin'ny ankohonany ary mampivelatra eritreritra mandanjalanja bebe kokoa rehefa mahazo fahaiza-manao izay tena ilaina amin'ny ho aviny. Ny ray aman-dreny dia miaina miaraka amin'ny zanatsika isan'andro ka tsy mora jerena ireo fanovana ireo, fa ny marina dia noho ny voambolana nataon'izy ireo dia afaka mihodina amin'ny halehiben'ny fitomboany isika. Ny fomba fampifangaroan'izy ireo traikefa izay azon'izy ireo tamin'ny dia dia ilaina be amintsika koa.
Misaotra ny dia, voamarika ny fomba fitomboan'ny fahaizan'ny zanatsika mandinika, izay tena ilaina mba handraisana anjara asa misimisy kokoa kokoa manoloana ireo fanamby izay homanin'ny fiainana ho azy ireo. Raha hitandrina ireo fanovana ireo, tsy ilaina ny mandeha mitsangatsangana an-dranomasina miaraka amin'izy ireoAmpy izay ny fandaozana ny tanànantsika mba hahafahanao mahazo tombony amin'ny zavatra niainanao tamina dia.
Tsikelikely ny atiny izay ianarana sy ireo soatoavina ireo. Ny dia sasany dia ho kolotsaina kokoa noho ny hafa, fa ny tena izy dia na aiza na aiza misy azy ireo afaka mianatra zava-baovao. Ny fahalalanas dia mifototra amin'ny zavatra lojika toy ny fanangonana valizy, ny fiaran-dalamby na ny fijanonana ao amin'ny hotely, mandra-pahafantatrao fa ny fihetsika tsirairay avy dia mitondra fiomanana mialoha.
Toy izany koa, izy ireo dia manana fotoana hankasitrahana ireo fianarana tena ilaina azo raisina amin'ny fitsangatsanganana izay atao matetika. Aza hadino fa ny fitsangatsangana dia mamela antsika hanaja ny olona manodidina antsika, manokatra ny saintsika ary hahatonga antsika handefitra kokoa. Ireo lafiny ireo dia mitovy amin'ny zanatsika. Hianatra hanaja ny lalàna, natiora izy ireo ary hanana faharetana bebe kokoa, raha fahano ny fahalianany voajanahary izay mampiavaka azy ireo.
Etsy ankilany, hanana fotoana hihaonana amin'ny olon-kafa ankoatry ny mahazatra izy ireo, handinika tontolo vaovao ary hatramin'ny fiteny vaovao aza. Izany rehetra izany dia hanatsara ny fahatsapana adventurous izay entin'izy ireo anaty ao amin'izy ireo ary raha fintinina dia te hahafantatra toerana vaovao ry zareo.
Ny ankizy izay, noho ny antony manokana na ara-toekarena, tsy afaka nankafy ny dia, dia hijaly noho ny tsy fahalalana ny fomba hampifanarahana tsara amin'ny fanovana. Ankoatry ny, tsy hanana ny fitaovana koa izy ireo mahazo avy amin'ny fitsangatsanganana miatrika toe-javatra vaovao amin'ny fiainana izy ireo. Tokony hotadidintsika anefa izany tsy tara loatra izany mba hahazoan'izy ireo ny fampianarana rehetra omen'ny dia iray.
Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny zanatsika dia manana tombony ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Hatanjaka ihany koa ny fianakaviana rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy. Izy ireo dia handrakotra ny filan'izy ireo hijanona ao anaty vondrona iray ary noho ny dia, dia ho afaka hanamafy ny fifamatorana ara-pihetseham-po amin'izy ireo izy ireo. Tsy maintsy ampidirintsika amin'ny fanapahan-kevitra samy hafa ireo ankizy kely mandritra ny dia mba hampiroboroboana ny fahatapahan-kevitr'izy ireo sy ny fahatsapany fa manokana sy sarobidy izy ireo.
Misaotra fitsangatsanganana miaraka amin'ny zanatsika afaka miaina toe-javatra mahazatra fianakaviana miaraka amin'ny anecdotes maro sy ny niainany izay hahatsiarovana foana. Aza adino fa ny fitsangatsanganana no fomba tsara indrindra hampiasana vola sy izay ianaranao bebe kokoa. Ho hitantsika ny fomba hijeren'ny zanatsika ny lalan'ny fahamatorana ary ho hitantsika izany ahoana no ahaizan'izy ireo ny toetrany amin'ny toe-javatra marobe. Izany rehetra izany dia hahafahantsika hahafantatra izay toetra amam-panahin'ny zanatsika tsirairay.
Noho izany, rehefa fantatsika izao ny tombony azo amin'ny fandehanana miaraka amin'ny ankizy, dia fotoana mety indrindra hijerena daty ary hiarahana amin'izy ireo amin'izany nofinofy izany. Tsy isalasalana fa ho lasa traikefa feno fianarana, Adventures ary anecdotes izay ho voatahiry tsy amin'ny finday fotsiny, fa hijanona mandrakizay ao amin'ny fitadidiantsika, amin'ny retina antsika ary amin'ny fiainantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Fa maninona no manan-danja ho an'ny zanatsika ny dia?
Manaraka ny lalan'ny orsa
Inona no ho hita any Bistrita, Romania